Former SDA popuar Pastor Joshua Maponga speaks on relocating to Zimbabwe after 20 years: Video - Mbare Times
According to Izwe Lethu, Maponga relocated to Zimbabwe after South Africans told him to go back and stop getting involved in South African issues as his country was in trouble. Speaking on the latest development, Maponga said:
I relocated to Zimbabwe. For South Africans who told me to go back, stop getting involved in South African issues as my country is in trouble I’m trying to solve African things, I’ve lived in South Africa for 20yrs. My family is in South Africa, South Africa is part of Africa, South African problems are African problems.
The Zimbabwean public speaker, author, philosopher, leader, Pan Africanist, musician, and social entrepreneur was based in South Africa for over 20 years.
fake South African passport former Seventh Day Joshua Maponga SDA Pastor